နောက်ဆုံးသတင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » နောက်ဆုံးသတင်း
Posted by thihayarzar on Jun 9, 2012 in Copy/Paste | 43 comments
ရွာများသို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နေကြောင်းနဲ့ 
သူ၁၀၀၀၀ ခန့် တွေ့ ရှိကြောင်းသတင်းရရှိ။
တွက်တပ်မတော် ချီလေပြီ ။
ရခိုင်ကိုကယ်တင်ဖို့တပ်မတော်ရေမှလည်းရေပြင်ကိုကာကွယ်ရန်တွက် တပ်စခန်းမှထွက်ခွာသွားကြောင်း သိရှိရပါတယ်……..
မောင်တောမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် RSO ရိုဟင်ဂျာပျောက်ကြားများ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ဘင်္ဂလီများဖက်မှာ မော်တော်ဘုတ်သုံးစီး လူနှစ်ရာဝန်းကျင်ခန့် လက်နက်များ ကိုင်ဆောင်ချီတက်လာတယ်လို့ လေးဝတီသတင်းထောက် သတင်းပေးပို့သွားပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာ တပ်ပေါင်းစုကို ထောက်ခံသော်အဖွဲ့ စည်းသည်
ပြည်ပမှ အကြမ်းဖက်သမားများဖြစ်ကြောင်းကို တို့ တမျိုးသား
လုံးသတိရှိကြပါ နောက်မီဒီယာပိုင်းမှာလည်း ပြည်ပရောက်မြန်မာ
မီဒီယာများနဲ့ လည်းအဆက်သွယ်ရှိကြပါတယ် ပါးနပ်ဖို့ လိုမည်။
၁/၂၀၁၂ ၁၄၄ မာရှယ်လောအမိန်.
ဘူးသီးတောင် နှင့် မောင်းတော အတွက်ပါတပ်မတော်မှကြည်းရေလေ အဖက်ဖက်မှအင်းအားထိုး ကာကွယ်မှုများညတွင်းချင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်အောင်မြင်ပါစေ သွေးချင်းတွေ
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက ရခိုင်တွေနဲ့ ဆိုင်သလို ပိုင်သလို ရခိုင်ဒေသကိုလဲ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့ ဆိုင်တယ် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက ပိုင်တယ်… ရခိုင်ဟာ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်နယ်မြေပါ အကျဆုံးမခံပါဘူး… အဲဒါကြောင့် ဒေသခံများ အနေနဲ့ လက်နက်ကိုင် တပ်တွေနဲ့ အမြန် ပူးပေါင်းပြီး ကူညီကြပါ… မြန်မာတွေ အားလုံး အချင်းချင်း နားလည်မှုတွေ ယူကြပါ… ဘင်္ဂလီကုလား ဆိုးတွေကို စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ တိုက်ထုတ်ကြပါ….
ကုလားများဘက်မှလည်းရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ် စံပြကျေးရွာအနီးရှိ လသာရွာတွင် ကုလားတစ်သောင်ကျော်လောက် လက်နက်အပြီးစုံနှင့် အဆင်သင့် ကိုင်ပြီး မြို့ပေါ်သို့ချီးတက်ဖိုအတွက် အဆင့်သင့်ပြင်ဆင်နေကြောင်းသိရသည် အဲဒီကုလားတွေက လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့များကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ရဲများဟာ နောက်သို့လှည့်ကြောင့်သိရသည်။ မောင်တောမြို့တွင်း လူထုများယနေ့အတွက်တော်တော်စိတ်ပူပန်းစိုးရိမ်းနေကြကြောင်း
ဥက္ကဌ ဦးဘရွှေ၏ ယနေ့ည 10နာရီ 15မိနစ်တွင် ပြောပြချက်အရ မောင်တောမြို့ပေါ်တွင်
၄င်းက “စစ်တပ်လည်းရောက်ပြီ၊ လုံထိန်းတွေလည်းရှိတယ်၊ ပုဒ်မ 144လည်းထုတ်ထားတယ်၊ မိုက်နဲ့လည်း လိုက်အော်နေတယ် ဆိုတော့ အခုနည်းနည်းတည် ငြိမ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြောလို့တော့မရသေးဘူး၊ ဘင်္ဂါလီတွေကတော့ လူစုနေကြတယ်၊ မြို့ပေါ်ကို ၀င်မယ်လို့ကြားတယ်။ လုံခြုံရေးကလည်း နေရာတိုင်းကိုတော့ မရောက်နိုင်ဘူး။ နယ်က ရွာတွေကတော့ အရမ်းကိုစိုးရိမ်ရပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
၄င်းကဆက်လက်ပြောကြားရာတွင်“လုံခြုံရေးကြီးပဲ အားကိုးလို့မရဘူးလေ။ တစ်ခုမှာပြသနာဖြစ်နေရင် နောက်တစ်ခုမှာ နာရီဝက်နောက်ကြတာနဲ့ ကုန်ပြီ။ ကိုယ့်လုံခြုံရေးကိုယ်ဘာသာ စောင့်နေရတယ်။ မီးရှိ့လိုက်ရင် မီးကိုပဲ ကြည့်ရမလား၊ သူတို့ရန်ကိုကာကွယ်ရမလား။ သွားပြီလေ။ ကျွန်တော်တို့က မောင်တောဈေးကြီးနားကလမ်းမှာ ကိုယ့်လူစုနဲ့ကိုယ်ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်အင်အားကိုယ် လူငယ်တွေလက်နက်ကိုင်ပြီး တစ်နေရာမှာ လေးဆယ်၊ သုံးဆယ် စသဖြင့် ချထားတယ်၊ မောင်တောမြို့ဝန်းကျင် ကျေးရွာအရေအတွက် အတော်များများကိုလည်း မီးရှိ့၊ အကြမ်းဖက်ခံရပြီးပြီ၊ ရွာသစ်ဖက်က သူတို့အိမ်ကိုသူတို့မီးရှိ့တယ်။ သူတို့အိမ်ကိုရှိ့ရင် ဘေးကရခိုင်အိမ်တွေကိုလည်းလောင်တယ်လေ”ဟုပြောသည်။
ကုလားတွေ မာယာများတယ် မီဒီယာနဲ့ လည်းတိုက်ခိုက်တယ် တပ်မတော်ပြည်သူသွေးခွဲတယ် ကိုယ့်ဖက်က မီဒီယာများ ပါးနပ်ကြပါခင်မျာ
နောက်ထပ် တက်လာတယ် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းမယ်တဲ့ ဒါဟာ လူတွေကို တမင်စိတ်ဝမ်းကွဲအောင် တင်တဲ့ သတင်းပဲ ။ ဘယ်ကမှန်း မသိတဲ့ သတင်းဌာနတွေရဲ့ လှည့်စားမှုအောက်ကို ရောက်ပြီး အချင်းချင်း ယုံမှားသံသယ မဖြစ်ကြပါနဲ့ … ။နိုင်ငံတကာမှာပါ ကိုယ့်ဖက်ကရန်စခြင်း
မဟုတ်ဘဲ ဘင်္ဂလီများမှ ကျူးကျော်မှုပြုလုပ်မှုသာဖြစ်ကြောင်းကို
တစ်ချို့ကလည်း စစ်တပ်ဆို အကောင်းမမြင်ကြတော့ စဉ်းစားမနေဘူး ယုံလိုက်ကြတာပဲ အပြစ်တင်လိုက်ကြတာပဲ အခြေအနေဲ့ အချိန်အခါကိုကြည့်ပြီး ဒီလောက်လေးတော့ အကင်းပါးသင့်တယ်ဗျ ။ မဟုတ်ရင် ရန်သူရဲ့ လှည့်စားမှုအောက်ကိုရောက်ပြီး နေစရာ ဘုံပျောက်သွားမယ် ။ဒီချိန်မီဒီယာ ပြည်သူ တစ်မျိုးသားလုံး
စည်းလုံးဖို့ လိုတယ် အမေတွေအဖေတွေတနေလို့ မရဖူး
ဟိုကတကယ်လုပ်နေပီ ကာကွယ်ကြပါ ကာကွယ်ကြပါ
ရခိုင်ပြည်မှသည် တစ်နိုင်ငံလုံးမဖြစ်အောင် ကလောင်နဲ့ ဖြစ်စေ
လက်နက်နဲ့ ဖြစ်စေ အသိစိတ်ကိုယ်စီနဲ့ ကာကွယ်ကြပါဗျာ
အမျိုးပြောက်မှာ တွေးကြောက်လို့ ပါဗျာ…
ကိုယ်ရန်စခံရတာ ကမ္ဘာကသိအောင်လုပ်ရမယ် တို့ တွေသွေးကွဲရင်.. ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်မလဲဆို သိတယ်နော်
ဒါတို့ မြေ ဒါတို့ ပြည် ဒို့ ပိုင်တဲ့မြေ
ဒို့ မြေကိုလာ ဒို့ ရေကိုသောက်
အိမ်ရှင်ကို ဖယ် ဒီလူမျိုး
ဒို့ ဧည့်သည်အဖြစ် ဘယ်လို
သင်နဲ့ တန်ရာ ငရဲပြည်။
ကျွန်တော်တို့ စစ်သားတွေကို မုန်းတီးနေသူများ
ရပါတယ် ခုချိန်မှာတော့ အားလုံးစည်းလုံးဖို့ လိုအပ်
နေတာကြောင့် အမျိုးပြောက်မှာတွေးကြောက်မိလို့ 
သင်တို့ ရဲ့ အယူအစွဲခံစားချက်တွေကို ခဏဖြုတ်ပြီး
တပ်မတော်သည် သင့်ရှေ့ တွင် ယခုရောက်နေပီ
မိတ္ထီလာလေတပ်ကိုလည်း အသင့်အနေအထားဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ထားကြောင်း သိရပါသည်..
တရက်ထဲ. သတင်း၅ပုဒ်တက်လာတာမို့.. ၂ပုဒ်ကိုနောက်ရက်ရွေ့ပေးထားပါတယ်..
အထူးအခွင့်အေ၇းအနေနဲ့.. ဒီနေ့ ၃ပုဒ်ပေးတင်ထားပါတယ်..
မနက်ဖြန်.. ပို့စ်တင်ဖို့ ကိုတာမရှိတော့ပါကြောင်း..
ဖတ်ကြည့်ပါ။တစ်ခုသိထားစေချင်တာက ၈၈ခေါင်းဆောင်ကိုမြအေးသမီးက အင်္ဂလန်မှာ
ရိုဟင်ဂျာတွေ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ဖို့အရေးတောင်းဆိုနေတယ်နော် ဟဟ
အဲ့ကောင်မလေးလဲ ရှောက်အော်နေတယ်။ ခုနေ သူ့ကို ဘူးသီးတောင် မောင်တော ပို့လိုက်ရမှာ။ ဒါမှသူ့ ရိုဟင်ဂျာတွေက ၀ိုင်းသမတာခံရမယ်။ ရိုဟင်ဂျာ ဘက်ကအသံကောင်းဟစ် ရင်တော့ ရန်သူပဲ
ပွဲလန့် တုန်း ဖျာဝင်ခင်းလိုက်တာလား လို့ ..
“ ခွက်ကြီးကြီးနဲ့ တောင်းတယ် ” တို့ ၊ “ခွက်ပြည့် တောင်းတယ်” ဆိုတာ ၊ အဲဒါမျိုးနေမှာဘဲ
မုတ်ဆိပ်ဖွားဖွားနဲ့ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ပေးစားပစ်လိုက် ၊ အေးရော ။
အလကား ဟောင်ဖွာ ဟောင်ဖွာလုပ်ပြီး နာမည်ကြီးချင်နေတယ်နဲ့တူတယ် ။
သောက် ရူး နွားသိုးကြိုးပြတ် ဘလူးသောက်ခွက်ကောင်တွေကို ဒီလောက် နှိမ်ထားတာတောင် ဖင်က ဒီလောက်ယားနေကြတာ နိုင်ငံလူမျိုးစုထဲ ဆွဲထည့်ပြီး တန်းတူအခွင့်အရေးပေးလို့ ကတော့ တစ်နိုင်လုံး ဇာတ်ပျက် ဖြစ်ပြီး အကုန် မျိုးတုန်းကုန်မှာ
နောက်ဆုံး တစ်ကမ္ဘာလုံး ၀ါးမျိုမဲ့ကောင်တွေ..
( အဆင့်အတန်းရှိသော မိတ်ဆွေများကို မဆိုလို….
တောခြုံအုံကြား ပညာမတတ် စာမဖတ် ဗဟုသုတမရှိ ပေးတာယူ ကျွေးတာစားပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကို ကျောခိုင်းနေတဲ့ အထက်က မြှောက်ပေးတိုင်း ဘောတက်အောင် က.နေကြတဲ့ လဗျွတ်ကောင်များကိုသာ ဆိုလိုသည် )
” Bull Shit ! Wai Hnin Pwint Thone ”
Whatashame ! Shit !
” Myanmar ”
*UNION OF MYANMAR*
*UNION IS STRENGTH*
မျိုးချစ်တပ်မတော်လို့ ခေါ်ပါရစေ။ လိုအပ်ရင်ကျုပ်တို့ပါ အသေခံတိုက်ပါရစေ။
ရိုဟင်ဂျာမှန်သမျ အကုန်သတ်ပစ်။ ဒုတ္ထဂါမဏိရဲ့ တပ်တွေလာပြီဟေ့ ။ ။ ။
ဒီကောင်တွေသတ်ကိုသတ်လို့ ကြိုက်တဲ့ အပစ်ပြောပါစေ။ ကျုပ်တို့ ပြည်သူတွေ
ထောက်ခံတယ်။ ပြည်သူတွေလဲ အသင့်ပြင်ထားကြပါ။ ပြည်တွင်းက အကြမ်းဖက်
တတ်တဲ့ မူစလင်တွေ တွေ့ ရင်ဆော်ကြရအောင်။
မှန်တယ် ကိုမင်းဇော်ရေ. ဒါမျိုး တော့ လာမလုပ်နဲ. အသင့်ပဲ ကိုယ့်လူ.. ကျုပ်တို. အရင်တုန်းက ဓားနဲ.ခုတ် လှံနဲ.ထိုးပြီး သတ္တိပြနေတဲ့ ဗမာ မဟုတ်တော့ဘူး ခေတ်မှီတဲ့ အရည်အချင်းအပြည့်နော်…
ကချင်ကစစ်ပွဲကို ငြိမ်းချမ်းစေချင်ပေမယ့် ရခိုင်မှာတော့ ဘင်္ဂလီအားလုံး ကိုတိုက်ထုတ်ပစ်ရမယ်။
တပ်မတော်သားများ ကျဆုံးမှုမရှိပါစေနဲ့။ ကျူးကျော်သူတွေ အတုံးအရုံးကျရှူံးပါစေ။
ခင်ဗျားတို့တွေအ၇ူးထမနေကြစမ်းပါနဲ့ဗျာ နိင်ငံကအခုမှတိုးတက်ဖို့ကြံသေး ခင်ဗျားတို့ကတောက်နေတဲ့မီးပေါ်
ခင်ဗျားတို့အာ၇ိုက်နေလို့လဲမပူနဲ့ ဘယ်သူမှမပါဘူး အားလုံးကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ်၇ှပ်နေတာ ၁၉၀ ၁၁၀ တွေပဲ
လမ်းပေါ်ထွက်နေကျတာ ဒီနေ၇ာမှာတော့အမေစုပြောတာမှန်သွားပြီ” တစ်ခုခုဆို၇င်ဖြေ၇ှင်းပေးချင်တာထက် ၇ုတ်၇ုတ်ဖြစ်၇င် စင်ပေါ်တက်ပြီး စကားပြော ချင်ကြတယ်” သူကတော့ နားဝင်ချိုအောင်ပြောတာပေါ့ အနက်ကတော့ တစ်ခုတစ်ခုဖြစ်၇င်ဘာမှမပာုတ်တဲ့ကောင်တွေကစင်ပေါ်တက်ပြီးအာ၇ိုက်ချင်ကြတယ်လိုပြောတာပါပဲ
စစ်တိုက်လို့အေးချမ်းပါစေလိုတွေးပြီး အဲ့ဒီလောက်သတ်ချင်ဖြတ်ချင်နေကြ၇င် ကိုယ့်လည်ကိုယ်လှီးပြီးသေလိုက်ကြ ကျွန်တော် ဘ၇ိတ်ဓါးစပွန်ဆာပေးမယ်။အွန်လိုင်းပေါ်တက်ပြီး လှော်မနေကြနဲ့ အဲ့ဒီလိုအော်တဲ့ကောင်တွေကပဲ တစ်ကယ်ဖြစ်၇င် ဖိနပ်ချွတ်ပြေးကြတာ ပာုတ်တယ်ပာုတ်
မင်းလဲ ပြေးမှာပဲ မဟုတ်လား နွားရဲ.
မင်းလည်းအခုလိုလိုက်အော်နေတာ တို့နဲ့ အတူတူပဲဆိုတာနားလည်ထားပါ။ မင်းလည်းအာလာရိုက်နေတာပဲ။ နည်းနည်းယဉ်ကျေးလို့မရဘူးလား။ မင်းပါးစပ်က အမေစုရဲ့
စကားကိုပြောနေတာ အော့နှလုံးနာလိုက်တာ။ အကြမ်းဖက်သမားတွေသောင်းကျန်းနေတာကို
စစ်နဲ့မအေးချမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင် ဘာနဲ့အေးချမ်း အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ထင်သလဲ ရွာသူ/သားတွေ
အကုန်သေပြီး ရွာတွေကုန်မြို့တွေကုန်ရင် အေးချမ်းမှာလား။ အားလုံးသေအောင်ထိုင်စောင့်နေရ
မှာလား သေနတ်နဲ့ပစ်နေတာကို တရားသွားဟောရမှာလား သေကုန်မယ်အားလုံး။
အဲဒီမှာ သေကြတာငါ့တို့ မြန်မာတွေကွ။ မင်းအမျိုးမဟုတ်လို့မင်းက အခုလိုပြောနေနိုင်တာလား။
ခွေးစကားမပြောနဲ့ ဟကောင် ….
မင်းသတ္တိသိပ်ရှိလျှင် အဲ့ဒီဘရိတ်ဓါး စပွန်ဆာ လာပေးစမ်းပါ … ။ မင်းလည်ပင်းအရင်လှီးပစ်လိုက်မယ် ။
လူသဏ္ဍန်ရှိပြီး တိရိစ္ဆာန်စိတ်ပေါက်နေတဲ့ သတ္တ၀ါတွေကြောင့် … ငါတို့တိုင်းပြည်မအေးချမ်းတာ …. ရွံစရာကောင်းတယ် …… ထွီ :mad:
ဟေ့ကောင် ဒါ အမျိုးသားရေး ကွ … နိုင်ငံရေးနဲ့ လာမရောနဲ့ …
အမျိုးသားရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့တောင် ခွဲမသိဘူးလား …
နိုင်ငံရှိမှ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ကျင့်သုံးလို့ရမှာ ….
နင်အမေ ဂျီးတော်တွေ ၀င်လို့ နိုင်ငံပျောက်ရင် ဒီမိုကရေစီလဲ မကယ်နှိုင်ဘူး ….
နိုင်ငံ နဲ့ လူမျိးပျောက်ရင် ခွေးကလားတွေရောက်လာမယ်။
အေလိုး….ကုလားဆိုတာ ခုချိန်မှာ ပြည်သူကို နိုင်ငံရေးအုံကြွမှူ့အစိုးရကလုပ်တာပါဆို
မောင်းတောဆိုတာ ဘင်္ဂလားနိုင်ငံဖြစ်သွားမယ်..နိုင်ငံထဲက ကုလားကအစိုးရကိုဘင်္ဂလားနဲ့
မပတ်သတ်ဘူးလို့မျက်နှာချိုသွေး။ပြီးတော့ ပြည်ပက အယ်ကေဒါကို အီးမေးပို့…မင်းဒီနေ့
မင်းနေချင်သလိုနေ လေ။ ငါတို့ကိုလာမစော်ကားနဲ့။ ငါတို့ စစ်တပ်ကိုအားပေးတယ်။ ဘာဖြစ်လဲ ။
မင်းက ဝင်ပူနေရအောင် ရိုဟင်ဂျာ သူလျှို လား။ ဒါမှမဟုတ် မင်းအဖေ တွေလား။
ဟုတ်တယ်သဂျီးရယ်…ကောင်းတယ်…စည်းကမ်းကိုမရှိကြဘူး၊ ဖတ်ရတာငြီးငွေ့လာပြီ။ မပြီးကျတော့ဘူးလားဗျို့။
ဟေ့လူ ဒီလောက် အရေးကြီးသတင်းကိုဗျာ ဖတ်ရတာ ပျင်းလာပြီတဲ့… ခင်ဗျားတော်တော် နောက်တဲ့လူပဲ…
ကျုပ်တို. ဗုဒ္ဓ အဆုံးအမနဲ.အညီ နေထိုင်တယ်…သီးခံသင့်သလောက် သီးခံမယ်…. ကျုပ်တို.နိုင်ငံ ကျုပ်တို.လူမျိုး ကျုပ်တို.ဘာသာ အတွက် သေမှာတော့ ကြောက်တယ် ဒါပေမယ့် အသက်စွန်.ရဲတယ်
သီးခံတယ်ဆိုတာ အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိပဲကောင်းတယ်နော်
လွန်လာရင် မြန်မာ့သွေးရဲတယ်ဆိုတာ တစ်ကမ္ဘာလုံးသိတယ် ဘောပေါက်
ရိုဟင်ဂျာတွေသာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားဖြစ်လာရင် တွေးရုံနဲ့တင်ကြောက်တယ်။ ရသမျှအခွင့်အရေးကို အကုန်သိမ်းကြုံးယူပြီး မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေကိုစော်ကားမှာ။ အခုတောင်ကြည့်ပါလား။ ဧည့်သည်အဖြစ် လက်ခံထားတာကို အားမရပဲ အိမ်ရှင်ဖြစ်ချင်လို့ အိမ်ရှင်တွေကို မောင်းချနေတာလေ။ နယ်စပ်မှာသာသူတို့ ကိုတရားဝင်ထားလိုက်ရင် နောက်ဆိုရန်ကုန်ကိုပါသိမ်းပိုက်မှာ။ တားထားမှ။ ရသမျှနည်းနဲ့တားရမှာပါပဲ။
ယူအက် နဲ့ အဆင် ပြေ ဖို့ အစ ပျိုး ရုံ ရှိသေး တယ် အယ်ခိုင်ဒါ က သွေးတိုး စမ်းနေပြီ နော်။
ဘင်္ဂလီ တွေ ကိုင်ထား တဲ့ လက် က လဲ ဆက်ပြောရ ရင် ကေအိုင်အေ တွေ နဲ့ ခု ထိ ငြိမ်းချမ်းရေး ကို အပြင် အထန် ဆွေးနွေး နေတာတောင် ဘာကြောင့် အဆင် မပြေ တယ် ဆို တာ ပါ ပါ လာ လိမ့် မယ်။
မြန်မာ ပြည် ကို နောက်ကြောင်း ပြန်လှည့် စေချင် သူ တွေ ရဲ့ အဓိက ပြည်ပ သွေးထိုး လှုပ်ဆော် မှု တွေ လို့ ထင်တယ်။
အစ္စလမ် ၁၀ ယောက်ကိုသတ်တုန်းက ငါတို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငါတို့တောင်းပန်ခဲ့တယ် ။
မဖြစ်သင့်ဘူးလို့လဲထင်ခဲ့တယ် ။အခုတော့ သီးမခံနိုင်တော့ဘူး ။သူတို့ကမိုက်ရိုင်းလာပြီ ။ သီးခံတယ်ဆိုတာအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိဘဲကောင်းတယ် ။ ၇ခိုင်ဆိုတာ ငါတို့မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေပါ ။
မောင်တောဖြစ်စဉ်တွင် အိမ်ခြေ ၃၈၆လုံး၊ ဈေးဆိုင် ၁၉ ခန်းနှင့် တည်းခိုခန်း တစ်ခု ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရကြောင်း သိရ
စစ်တပ်ကရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာ သေတဲ့လူကသေကုန်ပြီ..နောက်ဆိုပါလက်စတိုင်းလိုဖြစ်မှာကြောက်
“မနေ့က ဖြစ်စဉ်မှာ မောင်တော မြို့ထဲက ဗလီမှာ ဘင်္ဂါလီများ စုဝေးကြတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ သက်ဆိုင်ရာက ကျောင်းတွေ၊ ရုံးတွေ၊ ဈေးဆိုင်တွေကို ပိတ်ထားဖို့ သက်ဆိုင်ရာက ပြောခဲ့တယ်။ လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေက ဘင်္ဂါလီအုပ်စုကို သွားရောက် ဟန့်တားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူစုမကွဲဘဲ မွန်းလွဲပိုင်းမှာ အိမ်တွေကို စပြီး ဖျက်ဆီးတာ မီးရှို့တာ တွေလုပ်တယ်။ လူအင်အား ထောင်ကျော်ရှိတယ်။ သူတို့က လေးတန်း၊ ငါးတန်း အရွယ်ကလေးတွေကို ရှေ့တင်ထားပြီး မြှောက်ပေးပြီး လူအုပ်စုလိုက် လိုက်ဖျက်ဆီးကြတာ။ ဒီကိစ္စမှာ ဖြစ်စဉ်အမှန်တွေကို သတင်းမှန်တွေအဖြစ် အချိန်မီအားလုံး သိရှိရအောင် ဖေါ်ထုတ်ပေးကြပါ။ မောင်တောမှာရှိတဲ့ ဒေသခံရခိုင်တွေရဲ့ ဘ၀လုံခြုံမှုကို ဒီဘင်္ဂါလီတွေက လာထိပါးတာပါ။ အခု ကျွန်တော့်ကို မေးသလို စစ်တပ်က ပစ်ပြီလား ရဲတွေက ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းနေတာလားဆိုတာ ကို ဖြေရရင် ကျွန်တော်သိသလောက် စစ်တပ်က အခြေအနေ ဆိုးရွားလွန်းလို့ ရောက်လာတာ။ ပစ်တာခတ်တာ မရှိဘူး။ ရဲကလည်း မနေ့က လူအုပ်စုခွဲဖို့ ခြောက်လှန့် ပစ်တာက လွဲလို့ တစ်ခြားပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းတာမျိုး လုပ်တယ်လို့ မကြားပါဘူး။ အခုတော့ လုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ရှိသူတွေ လုပ်ဆောင်နေပြီလို့ သိရပါတယ်။” ဟု ဖြစ်စဉ်ကို ကိုယ်တွေ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူ ဒေသခံတစ်ဦးက Eleven Media Group မှ ဖုန်းဖြင့် မေးမြန်းမှုကို ဖြေကြားခဲ့သည်။
ရှုံ့ချတယ်။ မင်းမဲ့စရိုက်ဖြစ်ရပ်အတွက်ဘယ်လိုမှ လက်ခံနိုင်စရာ မရှိဘူး…ဘင်္ဂလီတွေကတော့မောင်းထုတ်ပစ်ရမယ်။
ဒေါသတွေ ငယ်ထိပ် ကို ဆောင့်တက်နေတယ်..။ ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်လို့ အရမ်းလည်းခံစားနေရတယ်…။ ဆုတောင်ရုံမှ တပါး တခြား မရှိတော့ပြီ…။ ရခိုင်ပြည်ကြီး အမြန်ဆုံး ငြိမ်းချမ်းပါစေ…….. ဒီကမ္ဘာမှာ ကုလားတွေ မြန်မြန် မျိုးပြုတ်ပါစေ..။ ဒီကောင်တွေ မရှိမှ ကမ္ဘာကြီးငြိမ်းချမ်းမှာ…
သူတို့ အတွက်နေရာ ပေးစရာ အကြောင်း မရှိတော့ပါ———-
နေရပ် ကို ပြန်ပို့ပေးကြပါ————-
သူကြီး ကျန်တဲ့ နှစ်ခုကို သူကြီးပြန်တင်ပေးမှာလား ကျွန်တော် တင်ရမှာလား သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ … စည်းကမ်းတွေကို သေချာ မမှတ်မိတာ ခွင့်လွက်ပေးပါ .. နောင်မဖြစ်စေရဘူး …
ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စ အကြောင်းတွေ ကို ကြားရတိုင်း စိတ်မကောင်းအရမ်းဖြစ်ရတယ် ။
ကိုယ်က အထက်မြန်မာပြည်က သာမန်လူတစ်ယောက် ၊ ကိုယ်ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ ဆိုတော့ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေ အတွက် အလှူခံလာမယ့် လူတွေဆီမှာ လှူရုံဘဲ တတ်နိုင်ပါမယ် ။ အခု freedom news group ထဲမှာ “ရန်ကုန် ၊ မိတ္ထီလာ လေတပ် နှင့် စစ်တွေ ရေတပ် မောင်တော သို့ထွက်ခွာ” ဆိုတာ ကြားရလို့ ၊ အားတက်မိတယ် ။ ဆန္ဒပြုရမယ် ဆိုရင်တော့ ၊ အပြတ်ကို ကျူပင် ကျူငုတ် မကျန် တိုက်ထုတ် ပစ်စေချင်ပါတယ် ။
မြန်မာ့တပ်မတော်သား အားလုံး အောင်ပွဲအမြန်ဆုံး ဆင်နိုင်ပါစေ ဗျား ။
အပေါ်မှာ ဦးဦးပါလေရာ ကွန်မင့် အတိုင်းလဲ သေချာမှတ်ထားပါတယ် ။
ဂျော့ဂ်ျဘုရှ် လို လူမျိုးနဲ့ ပဲ ကိုက်တယ်
မြ၀တီကနေ breaking news လွှင့်ပေးနေပါတယ်..
ဒီနေ့ ၉-၆-၁၂ မနက်က စလို့ အခြေအနေ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီ ပြောပါတယ်
ကြည်းရော၊ လေတပ်ကပါ စောင့်ကြပ်ပေးနေတယ် ပြောသွားပါတယ်..
အိမ်ခြေ ၃၀၀ ကျော်ပျက်စီး၊ ၇ ဦးသေ၊ ၁၇ ဦး ဒဏ်ရာရတယ်တဲ့
ဘင်ဂလီ၊ ရိုဟင်ဂျာကုလားတွေ တို့မြေပေါ်က အပြီးတိုင်မောင်းထုတ်ကြ….
ဒီအဖြစ်အပျက်တွေ၊ သောင်းကျန်းမှုတွေအတွက် နောင်ကျင်သွားအောင် လုပ်ရမယ်…
ဘင်္ဂါလီ ဘယ်နှစ်ကောင်လောက်ကို သတ်ပြီးပြီလဲ။ ဘယ်နှစ်ကောင်သေပြီလဲ။ အဲဒီသတင်းပဲ စောင့်နေပါတယ်။
သိတဲ့သူ တင်ပေးပါဗျာ။ စစ်တပ်ကရော ထိန်းသိမ်းယုံပဲလား။
ဒီကောင်တွေကို ပြန်မပစ်တော့ဘူးလား။ ဘယ်သူ့ကိုကြောက်နေတာလဲ။
အေးဗျ ။ မိုးပေါ်ထော်ပစ်တယ် ဆိုမှတော့ အားလုံးသူကြားချင်တာ မျိုး
မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး ထင်ပါတယ် ။ မကြေနပ်ဘူး ၊ လုံးဝ မကျေ နပ်ဘူး ။ ဒါပဲ ။
ဝေဖြိုး ကုလား ငြိမ်ငြိမ်နေ၊ ရွာထဲမှာ သူ့လူ ငါ့ဘက်သား အယောင်ဆောင်ရေးနေတဲ့ကောင်တွေ၊ အများကြီးတွေ့တယ်၊ကုလားကျင့် ကုလားကြံ။